Ikhaya » Izindaba Zamuva » Abantu » Umqondisi Omusha we-Explore Minnesota Tourism oqanjwe igama
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
UMbusi waseMinnesota uTim Walz umemezele namuhla ukuthi uLauren Bennett McGinty uzosebenza njengoMqondisi omusha we-Explore Minnesota.
UMbusi u-Walz uqoka u-Lauren Bennett McGinty njengoMqondisi we-Explore Minnesota Tourism.
U-Lauren unolwazi kwezokumaketha, ezokuxhumana, ekusebenzeni, kwezezimali, ezivakashini, ezemfundo, nasekukhulumeni ezingenzi-nzuzo ezizinze e-Minnesota.
Usuku lokuqala luka-Lauren e-Explore Minnesota Tourism lungoNovemba 15, 2021.
UMbusi waseMinnesota uTim Walz kanye noLieutenant Governor Peggy Flanagan namuhla bamemezele ukuqokwa kukaLauren Bennett McGinty njengoMqondisi we Hlola Minnesota Tourism, kusukela ngo-November 15.
"IMinnesota iphakathi kwezindawo ezihamba phambili zabahambi abavela emhlabeni wonke abafuna ukuhlola ubuhle bethu bemvelo nemiphakathi enempilo," kusho uMbusi uWalz. “Ngiyaziqhenya ngokuqoka uLauren njengomdlali Hlola Umqondisi Wezokuvakasha waseMinnesota, lapho ezoletha khona ubuchwepheshe bakhe kwezokukhangisa ukuze ahlanganyele izakhamuzi zethu futhi ahehe izivakashi ezintsha kanye nethalente esifundazweni sethu.”
"I-Minnesota iyikhaya lobuhle, ukusungula izinto ezintsha, namathuba okubonga amadolobha ethu anempilo nezinsiza zemvelo ezinhle," kusho uLieutenant Governor Flanagan. “Sijabule ngokuhola kukaLauren Hlola Minnesota Tourism futhi usize ekuqinisekiseni ukuthi abantu abavela kuzo zonke izizinda nezizinda zokuphila bazizwa bejabule futhi bamukelekile ukuhlola isimo sethu esikhuthazayo.”
“Sijabule kakhulu ukwamukela uLauren ebuholini bukahulumeni. Uzoba umholi osezingeni eliphezulu we-Explore Minnesota,” kusho uKhomishana woMnyango Wezokuqashwa Nokuthuthukiswa Komnotho (DEED) uSteve Grove. “Sibheke ngabomvu ukusebenzisana naye kanye nethimba elikhulu e-Explore Minnesota ukuze kusheshiswe ukusimama komnotho embonini yezokuvakasha engavamile yaseMinnesota.”
“Ngizizwa ngihloniphekile ngokubamba iqhaza elibalulekile njengoba imboni yethu yezokuvakasha isaqhubeka nokuqeda lolu bhubhane. Njengoba sibhekene nezinselelo endleleni yethu yokuya esimweni esisha esijwayelekile, sidinga ukuthola izindlela zokudala zokubandakanya abahambi bangaphakathi nabangaphakathi,” kusho u-Lauren Bennett McGinty. "Ngizibophezele ekulaleleni izidingo zozakwethu bezokuvakasha kulo lonke elaseMinnesota ukuze ngilethe umoya wokungenisa izihambi ongcono kakhulu ezweni futhi ngisize abahambi bathole isipiliyoni esiyingqayizivele esikhona esifundazweni sethu esihle."